မဒမ်ကိုး: ကျားထောင်ချောက် အပိုင်း (၃)
ကျားထောင်ချောက် အပိုင်း (၃)
ကိုစိန်ထွန်းစီးကရက်ဖွာကာအခန်းထဲတွင်ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေရင်းမြမြခင်နှင့်မိမိခင်တို့ ညီအစ်မနှစ်ဦးအကြောင်းကို တွေးနေမိသည်။ ထိုစဉ် ဒရိုင်ဘာကိုဘမောင် ရောက်လာပြန်သည် ။
“ ဆရာ .. မမိမိခင် က ဆရာ ကိုယ်တိုင်အောက်ကိုကြွခဲ့ပါလို့ ပြောခိုင်းလိုက်လို့ပါဆရာ”
ကိုဘမောင်၏စကားအဆုံးကိုစိန်ထွန်းစိတ်ထဲထောင်းခနဲဒေါသထွက်သွားသည်။ပြီးတော့မှမျက်မှောင်ကြုံ့ သွားပြီး ..
“ အေး. ..ငါခုလိုက်ခဲ့မယ် ..မင်းရှေ့ကသွားနှင့်လိုက် ”
ကိုစိန်ထွန်းအမိန့်အတိုင်းကိုဘမောင်ရိုရိုကျိုးကျိူးဖြင့်အောက်ဆင်းသွားလေသည်။ကိုစိန်ထွန်းနည်းနည်းတော့ စိတ်ထဲလှုပ်ရှားသလိုရှိနေသည်။ဘာကြောင့်ရယ်မှန်းလဲမသိ။မှန်ရှေ့တွင်တချက်ရပ်လိုက်ပြီး ကြေနေသယောင် ရှိသောအကျီကိုနည်းနည်းဆွဲဆန့်လိုက်ပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သည်။ဆီဝနေသောဖီးပြီး သားခေါင်းကိုလဲဘီးဖြင့်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာသပ်လိုက်သေးသည်။ဘာဖြစ်နေသည်မသိ။ စိတ်တို့နည်းနည်းဂနာမငြိမ်သလိုလို ။ ...
အသက်ကို၀၀ရှုပြီးကြောင်လိမ်လှေကားကြီးအတိုင်းဆင်းလာခဲ့သည်။လှေကားတစ် ၀က်လောက်ရာက်တော့အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမကြီးဆီမှစန္နရားသံကိုကြားလိုက်ရသည်။ တီးခတ်နေသည့်ပုံစံ မဟုတ်။ စန္နရားခလုပ်များကိုဆော့ ကစားနေသည့်ပုံစံဖြစ်ပုံရသည် ။
သူဖြတ်ခနဲမြမြခင်ကိုသတိရသွားသည်။မြမြခင်နှင့်သူလက်ထပ်ပြီးသည်အိမ်ပေါ်ကိုရောက်သည့်အချိန် တွင်မဟော်ဂနီရောင်ဖိတ်ဖိတ်ထနေသောစန္နရားအကြောင်းကိုမေးဖူးရာမြမြခင်ကသည်စန္နရားမှာ မိမိခင်ဟိုက်စကူးအောင်သည့်အချိန်တွင်ဖခင်လုပ်သူမှဝယ်ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်း.မိမိခင်သည် စန္နရားတီးဝါသနာအလွန်ပါပြီးတက္ကသိုလ်တွင်လဲစန္နရားနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဆုတံဆိပ်များစွာရဖူးကြောင်းပြောပြ ဖူးလေသည်။ မြမြခင်ကတော့သူမက တယောသာလျှင်ဝါသနာပါပြီးစန္ဒရားမတီးတတ်သဖြင့်အမြဲတမ်း ညီအစ်မနှစ်ယောက်သီချင်းကိုတွဲတွဲတီးခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့သည်ကိုသူအမှတ်ရသွားသည် ။
သူခြေလှမ်းများဆက်လက်လှမ်းလိုက်သည့်အချိန်တွင်ဧည့်ခန်းကိုအပေါ်စီးမှမြင်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့် ရုတ်တရက်သူအံသြမှင်သက်သွားသည်။ဘရိုကိတ်လုံချည်အနက်ပွင့်ကြီးတွေနှင့်ဇာအကျီခပ်ပါးပါး ကိုဝတ်ထားသောဆံနွယ်အခွေများကိုဘေးကိုချလျှက်ချောမောလှပသည့် မိန်းခလေးတစ်ဦးပင်ဆယ်ဟီး ကိုစီး ထားပြီး ပန်းပုရုပ်တရုပ်ရပ်နေသည့်အလား....................။
ပါးလွှာသည့်ဇာအကျီကြားမှယှက်သန်းထားသောဘော်လီရွှေကြိုးများကို အထင်းသား မြင်နေ ရပြီး ဖြူလွှနေသောလက်ချောင်းများက စန္ဒရားခလုတ် များပေါ် တွင် ပြေး လွှားဆော့ကစားနေသည် ။ ပြီးတော့ သူမကမြမြခင် ၏ပုံတူပန်ကြီးကားကြီးကိုမော့ကြည့်လျှက်နောက်ကျောပေးရပ်နေသည်။
ကိုစိန်ထွန်း ရင်ခုန်သလိုလိုစိတ်လှုပ်ရှားသလိုလိုနှင့် ခေတ္တခဏ အံသြမှင်သက်နေမိသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားလိုက်သည်မှာလှေကားလက်ရန်းကိုကိုင်ထားသောလက်များပင်ချွေးစေးများပျံလာသလိုခံစားရသည်။ကိုစိန်ထွန်း ခြေလှမ်းများပင်မှားလာသလိုလို ..................။
ခေါင်းလှည့်ကာကြည့်သည်။ ကိုစိန်ထွန်းရင်တွေ ဒိုင်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ ..
" မိမိခင် ..မိမိခင်ပါနော် .. .."
. ကိုစိန်ထွန်း အသံကိုဟန်မပျက်ထိန်းပြီးမေးလိုက်သည်။
“ ဟုတ်ပါတယ် ကိုကိုထွန်း.. မိမိခင်ပါ..”
အဖြေနှင့်အတူနီထွေးသောနှုတ်ခမ်းတစ်စုံကပါအပြံူံးများပွင့်အာကျလာသည်။မျက်နှာကတော့ ညိုးလျလျပေမင့်မျက်ဝန်းများက စူးစူးရှရှတောက်တောက်ပပရှိလှသည်။ကိုစိန်ထွန်းဆိုဖာတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ရင်းစီးကရက်တစ်လိပ်ကိုမီးအသာညှိလိုက်သည်။ ထွက်လာသောမီးခိုးများကြောင့်မိမိခင်လက် တချက်ဝှေ့လိုက်ရာ . ..
" ဆောရီးပါ မိမိ ...ကိုယ်ဆေးလိပ်သောက်ပါရစေ."
" ရပါတယ်.ကိုကိုထွန်း...သောက်ပါ .. ကိစ္စမရှိပါဘူး .."
မိမိခင်ကပြောရင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှလွတ်နေသောဆိုဖာပေါ်သို့တင်ပါးလွဲခြေချိတ်ထိုင်လိုက်သည်။ မိမိခင်၏ဟန်ပန်အမုအယာများမှာဝမ်းနည်းနေသော်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု့အပြည့်ရှိနေသည့် အသွင်မှာအထင်အရှားပင်...
" မြကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်လဲတော်တော်စိတ်ထိခိုက်နေရပါတယ် မိမိ ..."
“မိနားလည်ပါတယ်..ကိုကိုထွန်း..မိပြန်လာတာလဲ မမရဲ့နာရေးကိစ္စကြောင့် နောက်ဆုံးမျက်နှာကိုမြင်ချင်လို့ပြန်လာခဲ့တာပါ " ဒါပေမယ့်မမမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးတောင်ကန်တော့ခွင့်မရလိုက်တာတော့ မိအရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ် ."
" ဟုတ်ပါတယ် .ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးမို့လို့မိမိပြန်လာတာကိုကိုယ်တို့မစောင့်လိုက်နိုင်တာပါ . မိမိပြန်လာမယ်လို့လဲ မထင်ထားကြဘူးလေ."
ကိုစိန်ထွန်းစကားသံအဆုံး မိမိခင်၏ ခပ်အက်အက်ရီသံကထွက်ပေါ်လာသည်။
" အဟက်ဟက်. .... တစ်ဦးတည်းသောဆွေမျိုးလဲဖြစ်အမရင်းလဲဖြစ်တဲ့သူရုတ်တရက်ကြီးဆုံးသွားတာကိုမှ မိမိပြန်မလာရင်မိမိဘာဖြစ်သွားမလဲ ....ကိုကိုထွန်း .မိမိအဲလောက်အသည်းမမာပါဘူးလေ.."
" ကဲ ..ဟုတ်ပါပြီ .မိမိရယ် ..မိမိဘယ်တုန်းကရောက်လဲ ခုရော မိမိဘယ်မှာနေဖို့စီစဉ်ထားလဲ .."
" မိ.ဒီနေ့မနက်ဘဲရောက်တာပါ ။ဒါပေမယ့် ခုလောလောဆယ်တော့ မိ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စီစဉ်ပေးတဲ့ ဟိုတယ်မှာတည်းနေပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဒီအိမ်မှာဘဲနေမှာပါ...ကိုကိုထွန်း...မမမြ နဲ့ကိုကိုထွန်းနဲ့ခွဲနေကြတယ်လို့ကြားတယ်။.အဲဒီတော့ မိ ..ရက်လည်ပြီးတာနဲ့ပြောင်းလာမယ် မမအခန်းမှာနေမယ် .။.မိ အတွက် ကြီးလှ ကိုဘဲအဖော်ခေါ်ထားပါ့မယ် ..သြော်တခုတော့ပြောရဦးမယ်.. ..မိရဲ့သူငယ်ချင်းဘိလပ်ကကျောင်းနေဖက်ဖရန့်တစ်ယောက် က နောက်အပတ်ထဲမှာရောက်မယ် သူ့ကိုလဲ ဒီမှာဘဲ ခနတည်းခိုင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ နော် ..ဘာလို့ဆိုတော့ သူကဘိလပ်မှာနေတာလဲ ကြာပြီ . မိနဲ့လဲ အင်မတန်ရင်းနှီးလေတော့ သူဒီလာတုန်း မိအိမ်မှာတည့်းပြီး သူ့ကိုဟိုဟိုသည်သည်လိုက်ပို့ဖို့လဲရှိလို့သူ့ကိုမိအခန်းတစ်ခန်းပြင်ထားပေးရမယ်ကိုကိုထွန်း..ကိုမိက ကြိုပြောပြ တာပါ ။ "
မမာသော်လည်းခွင့်တောင်းသည်မဟုတ်သည့်အမိန်သံအရိပ်အယောင်စကာလုံးများကိုတရစပ်ပြောသွား ပုံကို ကိုစိန်ထွန်းအောင့် သက်သက်ဖြစ်မိသော်လည်း ဘာမှပြောလို့မရ။
"ကောင်းပီလေ..စီစဉ်ပေးပါ့မယ်။မိမိကြိုက်တဲ့အချိန်သာပြောင်းလာပါ။..ကိုယ်... ကြီးလှကိုပြောထားလိုက်ပါ့ မယ် .."
" သြော် နောက်တစ်ခု က ဒီအိမ်မှာ တခြားသူစိမ်းတွေဘာတွေများ ရှိနေသေးလား ရှိနေတယ်ဆိုရင် . မိ အခန်းကို ကြီးလှ တစ်ယောက်ထဲပဲ ၀င်ထွက်ပါစေ ကိုကိုထွန်း. .မိက မိပစ္စည်းတွေကို သူတစ်ပါးယူကိုင်တာ တွယ်တာ မကြိုက်လို့ပါ "
" ဒီအိမ်မှာ ကြီးလှအပြင် မြမြကိုယ်ဝန်ရှိကတည်းက အဖော်ရအောင်ခေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ဆွေနီးမျိုးစပ် ညီမတစ်ယောက်တော့ ရှိတယ် မိမိ။ ကိုယ်ပြောထားလိုက်ပါမယ် "
" ခနနေရင် ကြီးလှ ကိုခေါ်လိုက်ပါ ကိုကိုထွန်း မိ.မှာစရာရှိတာ မှာခဲ့ချင်လို့ "
မိမိခင်စကားအဆုံး ကိုစိန်ထွန်း အိမ်ထဲကိုတချက်လှမ်းကြည့်ရင်း အသံပြုလိုက်သည်။
နောက်ဖက်ခန်းဆီမှ ထွက်လာသောကြီးလှခင်မျာ မိမိခင်ကို မြင်လိုက်သည်ရှိသော် . အပြေးတပိုင်းနှင့် လာပြီးဖက်ငိုတော့သည်။
" မိမိလေးရယ် . ရက်စက်လှချည်လား ခုမှပြန်လာရသလား.အမြလေးမရှိတော့ဘူး . အမြလေးမရှိရှာတော့ဘူး ..အကိုကြီးတို့လဲမရှိတော့ဘူး ..... အီးးဟီးးးးဟီးးး "
ကြီးလှတစ်ယောက် မိမိခင်ကိုဖက်ရင်းချုံးပွဲချငိုလေတော့သည်။ မိမိခင်မှာကြီးလှကိုဖက်ပြီးမျက်ရည်အ၀ိုင်း သားနှင့် နှစ်သိမ့်ရပြန်သည်။
" တိတ်ပါ ကြီးလှရယ် .မိလဲဘယ်လိ်ုမှမတတ်သာလို့ နောက်ကျသွားရတာပါ. မိမှာ မမမြရဲ့နောက်ဆုံးမျက်နှာတောင် မြင်ခွင့်ရလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး . မိဘယ်လောက်ခံစားရမလဲ ဆိုတာသာ ကြီးလှတွေးကြည့်ပါတော့ "
" သေချင်းသေ အိုနေတဲ့ ကျုပ်သေပါတော့ မိမိလေးရယ် .ဘယ်နှယ့် သူတော်ကောင်းကလေးမှ သေရတာ တုန်း ။ အင်မတန်စိတ်နှလုံးကောင်းရှာတဲ့ ကလေးမ. ကံဆိုးလိုက်တဲ့ကလေးမ "
အရွယ်အိုရှာပြီဖြစ်သော အိမ်ထိန်းကြီး ကြီးလှ. မြမြခင်နှင့်မိမိခင်တို့ ကို မိခင်နှင့်မခြားတလှဲ့ဆီ ထိန်း ကျောင်းလာခဲ့သော ကြီးလှ။ မြမြခင်မျက်စိအောက်တွင် ပိုးစိုးပက်စက် သေသဖြင့် စိတ်ထိခိုက်နေ ရှာသည်။
"မငိုပါနဲ့တော့ ကြီးလှရယ် ..မိလဲ အရမ်းကိုစိတ်ထိခိုက်နေရတာပါ ။ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲလေ။ သူ့ကံကို က ဒီလောက်ပဲပါလာလို့ပေါ့ ။ မိလဲ ဒီအိမ်ကို မမမြ ရက်လည်ပြီးတာနဲ့ ရွှေ့လာမယ် ။ မိနေဖို့အခန်းကို ပြင်ထားပေးနော်.. မမအိပ်ခန်းနဲ့ ကပ်လျှက်က အရင်မိနေခဲ့တဲ့အခန်းကို ပဲပြင်ထားပေးပါ ။ မမအခန်းကိုလဲ ဘယ်သူမှမ၀င်မထွက်ပါစေနဲ့ ။ မမရှိတုန်းကအတိုင်း ပဲထားပေးပါ ။"
" အေးပါ မိမိလေးရယ် . ကြီးလှပြင်ထားပေးပါ့မယ် . မိမိလေးကိုမြင်ရင် အမြလေးကိုပိုသတိရတယ်. ကြီးလှ ဖြင့်ရင်ထဲမချိဘူး ကွယ် .. "
ပြောရင်းကို ချုံးပွဲချငိုပြန်လေသည်။ ဆိုဖာဘေးတွင် ကျုံ့ကျုံ့လေး ထိုင်ရင်း မျက်ရည်များကို ပ၀ါစွန်းတဖက်ကိုသုတ်လိုက် ဖြင့် လုပ်နေသော ကြီးလှကို ကိုစိန်ထွန်းကြည့်မရတော့ချေ။ သက်သက် အိုက်တင်လုပ်နေသလိုလိုခံစားလာရသည် ။ သို့ဖြင့်တချက်လှမ်းဟန့်လိုက်သည်။
" ကြီးလှ အဲလိုငိုနေတော့ရော မြကပြန်ရှင်လာမှာမို့လို့လား . ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေစိတ်ဆင်းရဲတာဘဲ ရှိမပေါ့. ဘယ်နှယ့် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ မငိုနဲ့ ကျုပ်မကြိုက်ဘူး . သွားတော့ နောက်ဖေးကို..."
ကိုစိန်ထွန်း၏ ခပ်ငေါက်ငေါက်စကားသံအဆုံး ကြီးလှခင်မျာ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဟု ပြောကာ ခေါင်းကိုငုံ့ ရင်း မျက်ရည်သုတ်ခါ နောက်ဖက်သို့ ခပ်ကုတ်ကုတ်ကလေးဝင်သွားရှာလေသည်။
နောက်ဖေးခန်းသို့ ကြီးလှ ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားချိန်တွင် မိမိခင်၏ ခပ်မာမာလေသံ ထွက်ပေါ် လာ လသည်။
" အို ..ကိုကိုထွန်းအဲလိုမပြောပါနဲ့ . မိမိတို့ မမတို့ဆိုတာ ကြီးလှလက်ပေါ်မှာကြီးရလာရတာ . မာမီက မိတို့ ကို မွေးရုံဘဲမွေးနိုင်တာ။အစစအရာရာ ကြီးလှဘဲ ထိန်းကျောင်းပြီးချီးသေးကအစလုပ်ပေးခဲ့ရတာ။ မိမိတို့တသက် ကြီးလှဟာ အမေလိုဘဲ ။ နောက်ပြီး မမမြက ကြီးလှမျက်စိရှေ့တင်သေတာဆို ။ ဒီတော့ ခမျာခံစားရတာ ပေါ့ ။ ဒါတော့ကိုကိုထွန်းနားလည်ဖို့ကောင်းတယ် "
' ဆောရီးပါ မိမိရယ် . ကိုယ်က မိခရီးရောက်မဆိုက် စိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုးလို့ပါ ။"
"နာရေးကြောင့်ပြန်လာတဲ့လူကိုစိတ်ထိခိုက်မှာဆိုးလို့ ဆိုတဲ့စကားနဲ့တော့မပိတ်နဲ့လေ ကိုကိုထွန်း
ဒီအကြောင်းတွေဟာ မကြားချင်လဲကြားမမြင်ချင်လဲ မြင်နေရမှာဘဲမဟုတ်လား ။ ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ မိမရှိတုန်း ဒယ်ဒီရယ် မာမီရယ် မိ တူမလေးရယ် ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ် . ခု မမမြလဲသေပြီ။ မိရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အကုန်မရှိတော့မှ ပြန်ရောက်လာရတဲ့ မိ အတွက် ဒီလောက်လေးကြားတာလောက်နဲ့တော့ ထူးပြီး စိတ်မထိခိုက်တော့ပါဘူး ကိုကိုထွန်း။ ရပါတယ် ။ မိအတွက် စိုးရိမ်ပေးတဲ့ ကိုကိုထွန်းကို လဲကျေးဇူး တင်ပါတယ် ။"
ကိုစိန်ထွန်းစီးကရက်မီးခိုးများကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်းမိမိခင်ကိုတချက်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ခပ်ဆတ်ဆတ်ပြောပြီး ဆိုဖာပေါ်တင်ပလွဲထိုင်နေသော မိမိခင်၏ပုံစံမှာမြမြခင်နှင့်ဆင်သယောင်ရှိသော်လည်းမြမြခင်ထက်ပိုပြီး သွက်လက်ထက်မြက်ဟန်ရှိပြီး ပန်းပုရုပ်တခု ကိုထုဆစ်ထားသည့်ပုံအတိုင်းကျော့ ရှင်းလှပနေသည်။
စင်ရော်တောင်မျက်ခုံးအောက်မှကော့သွယ်နေသောမျက်တောင်များနှင့်အထက်အောက်ညီညာသော နှုတ်ခမ်းပါးပါးတို့ကမိမိခင်၏မျက်နှာအလှကိုပိုမိုပေါ်လွင်နေစေသည်။ ခါးကိုခပ်မတ် မတ်ထားပြီး ခြေထောက်ချိတ်ကာတင်ပလွဲထိုင်နေသောပုံစံမှာမိန်းမပျိုတစ်ယောက် ၏ကောက်ကြောင်းကို ထင်ရှားစွာမြင်နေရသလိုပါးလွှာသောနိုင်လွန်မှန်ဇာလွှာအောက်မှရွှေကြိုးနှစ်ချောင်း ကိုယှက်ထားတဲ့ရင်အစုံမှာအသက်ရှုနေသဖြင့်နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြင့်မြင်ရသောပုရိသအပေါင်းမှာ ရင်ခုန်လှုပ် ရှားသွားနိုင်သည် ။ ကိုစိန်ထွန်း ကိုယ်တိုင်ပင် စိတ်တွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်နေမိသည်။ ...
မိမိခင်ပြန်သွားတော့ တစ်ညလုံး ကိုစိန်ထွန်းအိပ်မပျော်။ မိမိခင်စီးလာသည့် ဘောက်စ် ၀က်ဂွန်ကား လေးခြံ ထဲမှာထွက်သွားသည်အထိ မျက်စိတစ်ဆုံး ဧည့်ခန်းပြတင်းပေါက်မှ ကြည့်နေခဲ့ မိသည်။
ဘိလပ်မှာပညာတော်သင်သွားနေသူမိမိခင် ၊ မဟုတ်မခံ မာနခဲ မိမိခင် ၊ အချောအလှ မိမိခင် ဒီလိုပုံစံနှင့်ကတော့ ချုချင်သူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေမည့်မိမိခင် .........." ...မိမိခင် ......မိမိခင် ."....နှုတ်မှ မိမိခင် နာမည်ကိုတိုးတိုးရေရွတ်ရင်း စီးကရက်တစ်လိပ်ကို မီးညှိလျှက် ကုလားထိုင်ပေါ်တွင်ခြေပြစ် လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်သည်။
မျက်နှာကျက်ပေါ်တွင်လဲ မိမိခင် ၏ မခို့တရို့မျက်နှာ က ခပ်ရေးရေးပေါ်လာသည်။
ကိုစိန်ထွန်း ခေါင်းကိုခါရမ်းပြစ်လိုက်သည်။ အဓိပါယ်မရှိလိုက်တာ ။ မိမိခင်ကို ခုတစ်ကြိမ်သာမြင်ဖူး ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့် မိမိခင်သည် စိတ်ထဲရောက်လာသနည်း။ သူ့ကိုသူပြန်မေးဖြစ်သည်။
ဂဏာကမငြိမ်သလိုလို ။ စိတ်လှုပ်ရှားသလိုလို ။
ဒါဆို မြမြခင်ရောမချောဘူးလား။ ချောပါသည် ။ မြမြခင်အလှက တည်ငြိမ်သည့် အလှ။ မြမြခင် မျက်နှာက အေးချမ်းသည်။ ရိုးသည်။ မိမိခင်ကလှသည်။ ထက်မြက်ပုံရှိသည်။ ၀တ်ပုံ စားပုံတွေက ဘိလပ်ကပြန်လာသူလို့ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ပင် ခေတ်ဆန်သည်. ။
ညက ၀င်းဝင်းနွားနို့ လာတက်ပို့သည်ကိုပင် ထားခဲ့ဟုပြောပြီး တံခါးပိတ်ထားလိုက်မိသည်။ ၀င်းဝင်းမျက်လုံးများက စူးစမ်းသလိုလို သူ့ကိုကြည့်သွားတာ ကိုစိန်ထွန်းမြင်လိုက်သော်လည်း မသိကျိုးကျွန် နေလိုက်သည်။ မိမိခင် ကိုခနလေးစဉ်းစားနေချင်သည်။နောက် လေးရက်ကြာလျှင် မိမိခင်ဒီအိမ်ကြီးသို့ရောက် လာတော့မည်။ သူနှင့် တစ်အိမ်ထဲနေရပေတော့မည် ။
ထိုင်လိုက်ထလိုက် အိပ်ယာပေါ်ပြန်အိပ်လိုက် ဟိုဘက်လှိမ့်လိုက် သည်ဘက်လိမ့်လိုက်နှင့် ကိုစိန်ထွန်းတစ်ယောက် အတွေးဝင်္ကဘာမှာ ချာ ချာ လည်နေလေတော့သည်။......................။
၉ နာရီ ၅၅ မိနစ်
၁၆ ရက် ၁လ ၂၀၁၃
ကျားထောင်ချောက် အပိုင်း (၁)
ကျားထောင်ချောက် အပိုင်း ( ၂ )
ကိုစိန်ထွန်း အချိုးမပြေတဲ့ပုံစံ ကြည့် ၇တာ ဗီလိန်ပဲ
ရက်စက်ပြန်ပီ မမရယ် ....အပိုင်း(4) မြန်မြန်လုပ်ပါဦးနော် :)
zawlynn htoo said...
အပိုင်း ၄ ကိုမျှော်နေမယ်ကွယ်။
ငင် ဇာတ်သိမ်းတေးဝူးလား.... တော်တော်ကြာအူးမယ် နောက်တပုဒ်ဖတ်ရဖို့က နာတိနေတယ်နော်..။
စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် အဆက်ကို စောင့်နေပါကြောင်း
ကိုစိန်ထွန်း တစ်ရေးနိုးလာပီး))။
ညေးနှယ်အေ လွန် လွန်ရန်ကော ဂလောက်အကြားကြီး နေရသလား တစ်ပိုင်းနဲ့ တစ်ပိုင်းက။
မမကတော့ လုပ်ပြီ ချန်ထားပြန်ပြီ တစ်ဝက်တစ်ပျက် :)
ဒီမှာတို့လို့ တစ်လစ်နဲ့ ကျန်နေရတယ်....:(
ကိုစိန်ထွန်းပဲ သာမလား မိမိခင်ပဲ သာမလားပဲ .... စိတ်ဝင်စားမို့ကောင်းလားပြီ ....
အစ်မရေ ...အဆက်လေး မျှော်နေမယ် နော် ...
အိုးးးးးးးး နံပါတ်သုံးပြီးတော့ တို့ လို့ တွဲလောင်းကြီး
half feel လေးနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွယ်
အပိုင်းလေး မျှော်ပါအုံးမယ် ကိုကိုစိန်ထွန်းရေ ...
ဇာတ်ရှိန်ကမြင့်နေပြီကို စောင့်ယုံပဲပေါ့ ။
မိမိခင်နဲ့ကိုစိန်ထွန်း ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းသွားမလဲလို့သိချင်မိတယ်..နောက်အပိုင်း မျှော်နေတယ် ခင်ည..